Dhisida Ganacsi Ka Wanaagsan • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Ma qorsheyneysaa inaad bilowdo ganacsi cusub? Baro sababta ay tahay inaad u abuurto qorshe ganacsi kahor intaadan bilaabin. Kulankaan wuxuu dabooli doonaa qaybaha muhiimka ah ee qorshaha ganacsiga, oo ay kujirto fahamka ujeedooyinkiisa aasaasiga ah ee abuuritaanka istiraatiijiyad wax ku ool ah oo loogu talagalay kobaca, go'aaminta baahiyahaaga dhaqaale ee mustaqbalka, iyo soo jiidashada maalgashadayaasha iyo amaahda. Kaydso booskaaga Eventbrite.
Deyn baad u dooneysaa meheraddaada? Baro dukumiintiyada aad u baahan tahay ka hor intaadan dalban. Kulankaan wuxuu kaa caawin doonaa inaad fahanto dukumiintiyada aasaasiga ah ee horay loogu baahan yahay si loogu diyaariyo nidaamka dalabka amaahda. Kaydso booskaaga Eventbrite.
Waxaad diyaar u tahay inaad dalbato amaah, hadda waa maxay? Baro nidaamka amaahda iyo ikhtiyaarada kale ee maalgalinta ganacsigaaga yar. Kulankaan wuxuu kahadlayaa nidaamka amaahda bilow ilaa dhamaad. Waxay sidoo kale dabooli doontaa waxyaabaha kale ee laguu diido markii laga yaabo in laguu diido bangiga dhaqameed ama hay'ad maaliyadeed. Kaydso booskaaga Eventbrite.
Bangiyada iyo Bangiyada
Ma leedahay lammaane bangi? Baro adeegyada bangiyada iyo badeecooyinka iyo lamaanaha bangiga ee kugu habboon adiga. Kulankaan wuxuu daboolayaa waxa laga raadsado bangi iyo talooyin ku saabsan go'aaminta lamaanaha bangiga ee kugu habboon adiga. Waxaad sidoo kale baran doontaa wax soo saarka bangiga iyo adeegyada iyo sida ay uga caawin karaan ganacsigaaga. Kaydso booskaaga Eventbrite.
DT2 • Bartamaha Magaalada Dutchtown iyo la-hawlgalayaasha kale ee xaafadda waxay ka shaqeeyaan sidii ay khayraad u keeni lahaayeen milkiilayaasha meheradaha Dutchtown, kuwa cusub iyo kuwa la aasaasay, si ay uga caawiyaan ganacsatadeenna iyo xaafaddeenna inay horumar gaaraan Booqasho dutchtownstl.org/business ama ku soo biir our Milkiilayaasha Ganacsatada Dutchtown kooxda Facebook si aad u hesho war dheeraad ah.
La wadaag qoraalkaan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Qoraalkan ayaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay April 19th, 2021 .
DutchtownSTL.org Ganacsi Dhisida Ganacsi Ka Wanaagsan